Soomaaliya oo konton jirsatay - BBC News Somali
Soomaaliya oo konton jirsatay
30 Juunyo 2010
Image caption Aden Cabdulle Cusmaan, Madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya
Caawa waa habeenkii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay 1-da July 1960.
Waxaa habeenkaas la soo geba gebeeyay maamulkii Qarammada Midoobay ay u dhiibtay in Talyaanigu uu Soomaaliya gaarsiiyo gobannimo.
Taas oo uu ka sii horreeyay Gumeysigii Ingiriiska oo ka talinayay dhammaanba degaannada Soomaalida ee geeska Afrika marka laga reebo Djibouti.
Soomaaliya markii ay xorriyadda qaadatay, waxaa sagaalkii sano ee u horreeyay ka taliyay maamul rayid ah, Dimuqraaddi ah oo saxaafaddu ay xor tahay.
Aden Cabdulle Cusmaan ayuu ahaa Madaxweynihii u horreeyay ee Soomaaliya.
Cabdirashiid Cali Sharmaarka, oo mar ahaa Ra'iisal Wasaare uu magacaabay Madaxweyne Adan cabdulle, ayaa 1967 la tartamay ugana guuleystay xilka Madaxweyne.
Halkaas waxay Soomaaliya ku noqotay dalkii Afrika ugu horreeyay ee Madaxweyne doorasho looga adkaaday uu xilka si nabad ah u wareejiyo.
Cabdirashiid isaga oo kormeer dalka ku maraya ayaa Laas Caanood lagu dilay 1969.
Maalmo yar ka dib waxaa xukunka xoog kula wareegay militeriga oo uu horkacayo, General Maxamed Siyaad Barre. Af gembigaasi wuxuu ahaa mid aan dhiig ku daadan.
General Siyaad wuxuu xabsiga dhigay, Madaxweynihii hore, Aden Cabdulle Cusmaan, iyo labadii Ra'iisal Wasaare, Cabdirisaaq Xaaji Xuseen (oo hadda ku nool Minnepolis) iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo siyaasiyiin kale oo fara badan.
Taliskii Siyaad madaxda u ahaa oo soo maray xilliyo qaarba nooc yahay, waxaa uu ku dambeeyay dagaal sokeeye oo dalka in badan oo ka mid ah marba meel ka dhacay, ilaa uu caasimadda soo gaaray oo ay dowladdii burburtay.
Madaxweyne Siyaad isaga oo qax ah ayuu ku dhintay Nigeria, ka dibna meydkiisii dalka la keenya oo lagu aasay.
Tan iyo 1991 markii ay burburtay dowladdii Soomaaliya, gobolladdi Woqooyi ee Soomaaliya, gooni ayay isu taageen waxayna ku dhawaaqeen in ay yihiin dal madax bannaan oo waxay ku dhawaaqeen Jamhuriyadda Somaliland.
Dalka intiisii kale, Puntland oo weli ka tirsan dalku waxay samaysatay maamul u gaar ah oo leh Madaxweyne iyo Wasiirro.
Koofurta iyo bartamaha badankood waxaa ka taliya marba ninka ugu rasaas, ciidan iyo abaabul badan.
Dowladda Soomaaliya oo hadda jirta oo ah mid dalka dibaddiisa lagu soo dhisay, sida kuwii ka horreeyayba, waa mid ay ilaaliyaan ciidammada Afrika ee ka socda dalalka Uganda iyo Burundi.
Maanta oo u dambeysay duqeyn ka dhacday Muqdisho oo madaxtooyada laga soo riday ayaa waxaa ku dhintay 4 ruux waxaana ku dhaawacmay 12 kale.
Badda Soomaaliya waxaa dhuumaaleysi ku cayaaraya burcad badeed maraakiibta iyo dadka qafaasha, iibsadana, kalluumeysato sharca darro u xaalufinaya kheyraadka badda ee Soomaaliya, iyo ciidammo ka socda dalal badan oo caalamka ah oo sheegay in ay la dagaallamayaan burcad badeedda.
Dadka qaar wey u dabbaal degayaan munaasabaddan, qaarna waxay u arkaan in 50 sano ka dib, aan meesha lagu hayn wax loo dabbaal dego.
Waxay u arkaan xaaladda dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin in ay tahay wax laga murugoodo.
Dad badani waxay shaki ka qabaan in Soomaaliya ay dib u soo noqon doonto iyo in kale.